पेट दुखेर अस्पताल पुगेका युवकको गर्भवती भएको रिर्पोट आयो - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com पेट दुखेर अस्पताल पुगेका युवकको गर्भवती भएको रिर्पोट आयो - खबर प्रवाह
काठमाडौं । तपाईले कहिल्यै पुरुष गर्भवती भएको थाहा पाउनुभएको छ ? यो प्रकृति विरुद्धको कुरा हो । यस्ता कुराको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । तर एउटा अस्पतालले भने पुरुषलाई गर्भवती भएको रिपोर्ट दिएको छ । पेट दुखेर अस्पतालमा जचाउन गएका एक पुरुषलाई अस्पतालले गर्भवती भएको रिपोर्ट दिएको छ ।
अब कल्पना गर्नुस्, ति पुरुषले जन रिपोर्ट हातमा लिएर चिकित्सकको कुरा सुने कस्तो अनुभव गरे होलान् । यो भारतको घटना हो । भारतको उत्तर प्रदेशका एक युवक गर्भवती भएका छन् । उनी कसरी भर्गवती भए केही थाहा छैन तर उनलाई गर्भवती भएको सर्टिफिकेट दिइएको छ ।२२ वर्षका दर्शन नाम गरेका युवक सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे । एक दिन उनलाई निकै पेट दुख्यो । दुखाइ सहन नसकेपछि उनी सनराइज अस्पताल चेक गर्न पुगे । डाक्टरले अल्ट्रासाउन्ड गर्ने सल्लाह दिएपछि आएको रिर्पोटमा उनको पेट दुख्नुको कारण हुर्किरहेको बच्चा थियो । डाक्टर पनि आश्चर्यमा परे ।
दर्शनको पेटमा फिलो’ट्युबमा गर्भ भएकोले गुदाको नली सुन्निएको डाक्टरले बताए । रिर्पोट देखेर अचम्म परेका दर्शन र उनका परिवारले अन्य क्लिनिकमा लगेर रिर्पोट देखाउदा कुनै महिलाको रिर्पोट उनकोमा झुक्किएर आएको जानकारी दिए । कम्प्युटरले महिलाको रिर्पोट पेस्ट गरे पछि तुरुन्तै दर्शनको रिर्पोट आएकोले गल्ती भएको अस्पतालले स्विकार गरी माफी समेत मागेको छ ।
१० लाख दाइजो नदिँदा हत्या !
घरबेटीसँग अनावश्यक नाम जोडियो : प्रचण्ड